Yintoni Ubuthathu Embusweni?
Imfundiso kaZiqu zintathu ebuKristwini
Igama elithi "uZiqu zintathu" livela kwisibizo lesiLatini esithi "trinitas" esithetha "ezintathu zinye." Kwakuqala ukuqaliswa nguTertullian ekupheleni kwekhulu lesi-2 kodwa yamkelwa ngokubanzi kwiinkulungwane ze-4 ne-5.
UZiqu-zintathu ubonisa inkolelo yokuba uThixo ungumbumba wabantu abathathu abahlukeneyo abakhona ngokulinganayo kunye nentsebenziswano engunaphakade njengoYise , uNyana , noMoya oyiNgcwele .
Imfundiso okanye ingcamango yoBathathu Emnye iyintloko yeenkoliso zamaKristu kunye namaqela enkolo, nangona kungengabo bonke.
Phakathi kwamasonto anqabe imfundiso yoBathathu Emnye yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day-Saints, amaNgqina kaYehova , iiNzululwazi zamaKristu , ii- Unitarians , i-Church of Unification, i-Christadelphians, i-Union Pentecostals kunye nabanye.
Oluthe xaxa malunga namaqela okholo anqabela uZiqu zintathu .
Inkcazo yoBathathu Emnye kwiZibhalo
Nangona igama elithi "uZiqu zintathu" alitholakali eBhayibhileni, abaninzi abaphengululi beBhayibhile bayavuma ukuba intsingiselo yayo ichazwe ngokucacileyo. Konke ngeBhayibhile, uThixo uchazwa njengoBawo, uNyana, noMoya oyiNgcwele. Ayekho oothixo abathathu, kodwa abantu abathathu kwindawo eyodwa noThixo kuphela.
I-Tyndale Bible Dictionary ithi: "IZibhalo zibonisa uYise njengomthombo wendalo, umniki wobomi kunye noThixo wendalo yonke. UNyana ubonakaliswa njengomfanekiso ongabonakaliyo uThixo, ukubonakaliswa ngokuthe ngqo kwendalo yakhe kunye nemvelo, kunye noMesiya-uMkhululi. UMoya nguThixo ekusebenzeni, uThixo ufikelela kubantu-abachaphazelayo, bavuselela, bazalise, kwaye baholele.
Bonke abathathu bobathathu, bahlala kunye kunye basebenze ndawonye ukuze bafeze uveliso lukaThixo kwindalo yonke. "
Nazi ezinye iindinyana ezibalulekileyo ezibonisa imbono yoBathathu Emnye:
Hambani ke niye kubafundi beentlanga zonke, nibhaptize egameni likaYise noNyana noMoya oyiNgcwele ... (Mateyu 28:19, ESV )
[UYesu wathi], Ke kaloku, xa uMncedisi efika, endimthumelela kuni evela kuYise, uMoya wenyaniso, ophuma kuYise, uya kufakazela ngam. "(Yohane 15:26, ESV)
Ubabalo lweNkosi uYesu Kristu kunye nothando lukaThixo kunye nentsebenziswano yoMoya oyiNgcwele mayibe nani nonke. (2 Korinte 13:14, ESV)
Ubume bukaThixo njengoBawo, uNyana, noMoya oyiNgcwele buyabonakala ngokucacileyo kwezi ziganeko ezibalulekileyo kwiiVangeli :
Ubhaptizo lukaYesu - uYesu weza kuYohane uMbhaptizi ukuba abhaptizwe. Kwathi uYesu evuka emanzini, kwavuleka izulu, kwaye uMoya kaThixo, njengejuba, wehla phezu kwakhe. AmaNgqina kubhaptizo weva izwi elivela ezulwini lisithi, "Lo ndodana yam, endiyithandayo; UBawo wamemezela ngokucacileyo ukuba nguYesu, kwaye uMoya oyiNgcwele wehla kuYesu, wamnika amandla okuqala ulungiselelo lwakhe.
Ukuguqulwa kukaYesu - uYesu wathabatha uPetros, uYakobi, noYohane phezulu entabeni ukuze bathandaze, kodwa abafundi abathathu balala. Xa bevuka, bamangaliswa ukubona uYesu ekhuluma noMoses noEliya . UYesu wa guqulwa. Ubuso bakhe bukhanya njengelanga, nesambatho sakhe saqhaqhazela. Kwaye ilizwi elivela ezulwini lathi: "Lo nguNyana wam othandekayo, endivuyisayo ngaye; mphulaphule." Ngelo xesha, abafundi abazange baqonde ngokucacileyo isiganeko, kodwa namhlanje abafundi beBhayibhile banokubona ngokucacileyo uThixo uYise ngokuthe ngqo kwaye baxhamle ngamandla kuYesu kule ngxelo.
IBhayibhile Eminye Imibhalo Ebonisa Ubuthathu Emnye
IGenesis 1:26, iGenesis 3:22, iDuteronomi 6: 4, uMateyu 3: 16-17, uYohane 1:18, uYohane 10:30, uYohane 14: 16-17, uYohane 17:11 kunye no-21, 1 kwabaseKorinte 12: 4-6, 2 Korinte 13:14, iZenzo 2: 32-33, Galati 4: 6, Efese 4: 4-6, 1 Petros 1: 2.
Iimpawu zoBathathu Emnye
Ubuthathu Emithathu (i-Borromean Ring) - Funda malunga neendandatho ze-Borromean, iindidi ezintathu zokungenelela ezifanekisela oothathu.
UZiqu-zintathu (Triquetra) - Funda malunga ne-triquetra, isimboli esincinci seentlanzi esincinci ezintathu esichaza ubuthathu.
Urim kunye neThummim: Izinto ezindala ezingaqhelekanga
I-College ye-Wesleyan ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT
I-SUNY yoLwandle lweeKholeji
Ukuza Kwamanqaku Okudlulayo Kwamaxesha Okudala eJamani
Imfazwe Yehlabathi II: uMarshal Arthur "Ibomber" Harris
I-Pace v. Alabama (1883)
IJografi kunye nokuHlola kweHaiti
Ubomi Ngaphambi Kokuzalwa
Iikholeji zezobuGcisa eziphezulu ze-Liberal e-US
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yeKasserine Pass